HUAWEI Y6II smartphone | မိုဘိုင်းဖုန်းများ | HUAWEI Myanmar
Make Life Bolder, Brighter, More Colorful ဘဝကို ပိုမိုရဲရင့်၊ တောက်ပပြီး အရောင်အသွေးစုံလင်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ
HUAWEI Y6II’s new larger dynamic 1280x720 resolution display is crystal clear and rivals top digital screens, immersing you in the vivid colors and vibrancy of life inawhole new way. The durable GFF transparent lamination protects the display from scratches to ensure long-lasting brightness. HUAWEI Y6II ရဲ့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော 1280x720 မျက်နှာပြင်က ကြည်လင်ပြတ်သားရာမှာ ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ထိပ်ဆုံးမှာရှိနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ဘဝကို အမျိုးမျိုးသော တောက်ပတဲ့ အရောင်အသွေးများနဲ့ ပုံဖော်ပေးနိုင်မှာပါ။ အကြမ်းခံတဲ့ GFF အကြည်ရောင်အလွှာလေးက မျက်နှာပြင်ကို အခြစ်ရာဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်တာကြောင့် အမြဲတမ်း ပြောင်လက်တောက်ပနေစေပါတယ်။
Rear Camera အနောက်ကင်မရာ
Take the best pictures of your life with the HUAWEI Y6II’s super-powered 13-megapixel camera. The wide-angle, 28mm lens witha2.0 aperture is made of scratch resistant, state-of-the-art glass. And the customized dynamic range is perfect in any light and any setting, puttingaprofessional-grade camera in the palm of your hand. Never missamoment. ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးသော ဓါတ်ပုံများကို HUAWEI Y6II ရဲ့ အကောင်းစား 13-megapixel ကင်မရာဖြင့် ရိုက်ယူလိုက်ပါ။ အနုပညာလက်ရာမြောက်ပြီး အစင်းခြစ်ရာဒဏ်ခံနိုင်သော ဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည့် အလင်းဝင်ပေါက် 2.0 ပါဝင်သော မြင်ကွင်းကျယ် 28mm မှန်ဘီလူးနှင့် မည်သည့်အကွာအဝေး၊ အလင်းအမှောင်မရွေးမဆိုရိုက်ကူးနိုင်သော ကျွမ်းကျင်အဆင့်ကင်မရာကို သင့်လက်ဖဝါးပေါ်တွင်ထားရှိပြီး အခိုက်အတန့်လေးတစ်ခုမျှမလွတ်အောင် ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။
Front Camera အရှေ့ကင်မရာ
Selfies have never looked so good. The HUAWEI Y6II comes with an enormous 8-megapixel camera—HUAWEI’s largest front-facing camera to date. The 2.0 aperture offersahuge, 77-degree range letting you take panorama selfies for the first time. Bigger background, bigger story, bigger you. ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဆဲလ်ဖီရိုက်ချက်တွေကို တွေ့ရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Y6II တွင် HUAWEI ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် 8-megapixel ကင်မရာကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်။ အလင်းဝင်ပေါက် 2.0 နှင့် မြင်ကွင်းကျယ် 77 ဒီဂရီအထိ ရိုက်ကူးနိုင်စွမ်းကြောင့် မြင်ကွင်းကျယ် ဆဲလ်ဖီတွေကို အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ခံရှုခင်းတွေနှင့်ဆဲလ်ဖီပုံတွေက်ု အပြည့်အဝခံစားနိုင်မှာပါ။
Auto Face Enhancement and Make-up Mode အလိုအလျောက် အလှအပပြုပြင်ပေးခြင်းနှင့် မိတ်ကပ်မုဒ်
Always put your best face forward with HUAWEI’s 10-level face enhancement option on the HUAWEI Y6II. The 10-millisecond face recognition creates beautification in real time, and can enhance personal photos as well as group shots. The HUAWEI Y6II also comes equipped with 8 beautification presets and customizable options, offeringarange of natural effects and highlights including lip gloss and eye shadow. သင့်ရဲ့အလှဆုံးသောပုံရိပ်တွေကို HUAWEI Y6II တွင်ပါဝင်တဲ့ မျက်နှာပြုပြင်ခြင်း အဆင့်၁၀ဆင့်ဖြင့် ရိုက်ကူးလိုက်ပါ။ တစ်ယောက်တည်းသာမက အုပ်စုလိုက်ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးချိန်တွင် ၀.၀၁စက္ကန့်အတွင်း လူ့မျက်နှာပြင်ကို မှတ်သားနိုင်ပြီး တချိန်တည်းမှာပင် မျက်နှာသွင်ပြင်ကို ပြုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ HUAWEI Y6II တွင် ကြိုတင်သတ်မှတ်နိုင်သော အလှအပအမျိုးအစား၈ခုကို စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝဆန်ဆန် ပြင်ဆင်ချက်များနှင့် နှုတ်ခမ်းနီနှင့် အိုင်းရှဲဒိုးတို့ဖြင့်လဲ ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
Elegant Design Style လှပကျော့ရှင်းသော ဒီဇိုင်း
You can makeabig statement withasimple gesture when using the HUAWEI Y6II. Metallic cross-stripes create 5,176 facets that not only catch and reflect the light, but also catch people’s attention. Other textures include: high-gloss black, or more fun options in yellow, pink and blue. The molded mirror polish and 60c-micro texture complete the device’s superior design. HUAWEI Y6II ဖြင့် ကြီးမားသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို ရိုးရှင်းသောအမူအရာတစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ သတ္တုသဏ္ဍာန် အစင်းက ရှုထောင့်ပေါင်း ၅၁၇၆ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးပြီး အလင်းဖမ်းယူပြီး အလင်းပြန်နိုင်စွမ်းရှိသည့်အပြင် လူတကာရဲ့မျက်လုံးကိုလဲ ဖမ်းစားနိုင်ပါတယ်။ အခြားအရောင်များအနေဖြင့်- အမဲရင့်ရောင်၊ ဒါမှမဟုတ် အဝါ၊ ပန်းရောင်နှင့် အပြာရောင်တို့လဲ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပြောင်လက်သည့်အရောင်တင်ထားပြီး 60c-mirco အသားတို့က ဤဖုန်းရဲ့ အကောင်းမွန်ဆုံး ဒီဇိုင်းကို ဖော်ဆောင်ပေးပါတယ်။
Customized Curves အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ထောင့်ကွေးများ
Don’t let anything slip away. The rounded curves of the 5.5-inch HUAWEI Y6II were designed for easy one-handed use, offering the greatest display size, best design and greatest comfort. *The product color may vary in different countries and areas. ဘယ်အရာကိုမှ လွတ်မထွက်သွားပါစေနဲ့။ ၅.၅လက်မရှိတဲ့ HUAWEI Y6II ရဲ့ လုံးဝန်းသောထောင့်ကွေးပုံစံဟာ လက်တစ်ဖက်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် ဒီဇိုင်းဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး အကောင်းဆုံး မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား၊ ဒီဇိုင်းနှင့် သက်တောင့်သက်သာအရှိဆုံးခံစားချက်များကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ *ထုတ်ကုန်အရောင်များသည် နိုင်ငံနှင့် ဒေသအလိုက်ကွာခြားနိုင်ပါသည်။
Smoother Performance & Ultra-High Efficiency ပိုမိုချောမွတ်ပြေပြစ်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော စွမ်းအင်ချွေတာရေးစနစ်
The HUAWEI Y6II’s Kirin 620, 1.2GHz processor let you live without compromises. The lightning fast, 64-bit octa-core allows multiple apps to be open simultaneously without sacrificing speed, power or performance. And the ARM architecture has ultra-high efficiency for longer battery life. The 2GB of RAM, 16GB ROM and 128GB SD card (supported) gives you more capacity, lower power consumption, faster speed and longer use than any smartphone you have ever owned. HUAWEI Y6II ရဲ့ Kirin 620, 1.2GHz processor က သင့်ကို နောက်ဆံတင်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ လျှပ်စီးကဲ့သို့လျှင်မြန်သော 64bit octa-core က မျိုးစုံသော အက်ပ်များကို အမြန်နှုန်း၊ စွမ်းအင် သို့မဟုတ် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ကို ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေပဲ ပြိုင်တူဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ARM architecture မှာလည်း အလွန်ကောင်းမွန်သော ဘက်ထရီချွေတာရေးစနစ်ပါရှိပါတယ်။ RAM 2GB နှင့် ROM 16GB နှင့် 128GB SD ကတ် (ထောက်ပံ့ပေးနိုင်) တို့က သင့်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသော စမတ်ဖုန်းတိုင်းထက် ပိုမိုများပြားသော သိုလှောင်မှုပမာဏ၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုပိုမိုလျော့နည်းခြင်း၊ ပိုမိုမြန်ဆန်မှုနှင့် ပိုမိုအသုံးခံနိုင်စွမ်းတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
Based on Android 6.0, the HUAWEI Y6II uses the EMUI4.1 operating system, using cutting-edge software to driveabreathtaking user experience. The built-in phone manager monitors power consumption for extended battery life, and cleans and optimizes the devices O.S., while the App Lock and Do Not Disturb functions protect user privacy. Android 6.0 တွင်အခြေခံ၍ HUAWEI Y6II သည် EMUI4.1 လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်ပေါ်တွင် အသုံးပြုသူများအကောင်းမွန်ဆုံးအတွေ့အကြုံများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန် နောက်ဆုံးပေါ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ ဖုန်းအတွင်းပါဝင်သော ဖုန်းမန်နေဂျာက ဘက်ထရီသက်တမ်းကြာရှည်စေရန်အတွက် ပါဝါသုံးစွဲမှုကိုတိုင်းတာပေးပြီး ဖုန်း OS စနစ်တကျရှိစေရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်မှုရှိစေရန်ပြုလုပ်ပေးသည့်အပြင် App Lock နှင့် Do Not Disturb လုပ်ဆောင်ချက်များကလဲ အသုံးပြုသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို လုံခြုံမှုပေးပါတယ်။